Sinyamekela ngokumalunga nokufunyanwa kwethu, kwaye le nkxalabo isasazeka kwizinto eziqhagamshelana nokutya kwethu. Ngokomzekelo, ukhetho lwezinto ezininzi ezikhuselekileyo zeebhotile zamanzi ezikhuselekileyo . Makhe sihlolisise ukhetho esinalo xa sicinga ukuba yeyiphi i-cookware ukusebenzisa.
I-Cookware ye-Stainless Steel inodibanisa iiMetali ezahlukeneyo
Enyanisweni, isinyithi esingenasici sinomxube wezinyithi ezahlukeneyo, kuquka i-nickel, i-chromium, kunye ne-molybdenum, yonke into engena kuyo ukutya.
Nangona kunjalo, ngaphandle kokuba i-cookware yakho yensimbi engenasinxibe idibene kwaye idibene, ubuninzi bezinyithi ezinokungena ekudleni kwakho akunakunceda. I-cookware yensimbi engenasiphelo kwimeko enhle inokuthi ithathwa njengekhuselekile ukupheka.
I-Anodized Cookware i-Aluminium i-Aware ingase ibe yindlela ekhuselekileyo
Kule mihla, abaninzi abapheki bezempilo bayaphendukela kwi-cookware e-aluminum e-aluminum. Inkqubo yokuvuselela i-electro-chemical idibanisa kwisiseko se-cookware sesiseko, i-aluminium, ukwenzela ukuba ikwazi ukungena ekudleni, kwaye yenza ukuba abapheki abaninzi baqwalasele umgangatho ongeyona intonga kunye nokupheka okukhangekiweyo. I-Calphalon ngumenzi okhokelayo we-cookware e-aluminium e-anodized, kodwa iminikelo emitsha evela kwi-All-Clad (eyamkelwa ngumculi ohloniphekileyo uEmeril Lagasse) kunye nabanye baya kuqina.
Ngaba Unokushiya I-Iron Cookware Ngokwenene Ukuphucula Impilo?
Olunye ulunge oluhle yile ndoda yokudala, insimbi yentsimbi, eyaziwayo ngokuhlala kwayo kunye nokusabalalisa kwayo.
I-cookware ye-iron iron inganceda ukuqinisekisa ukuba abadlayo endlwini yakho bafumana isinyithi esanele-apho umzimba ufuna ukuvelisa iiseli ezibomvu zegazi-njengoko ziphuma kwi-cookware kwi-food in small amounts.
Ngokungafani neensimbi ezinokuvela kwezinye iindidi zeebhotile kunye neepane, insimbi ithathwa njengesongezelelo sokutya okunempilo ngu-US Food and Drug Administration.
Abathengi bafanele baqaphele, nangona kunjalo, iindawo ezininzi zokupasa i-ironware zifuna ukuba ziqhathaniswe emva kokusetyenziswa kweminye ukukhusela ukugqithisa kwaye akunjalo nje ngezinye iinkqubo.
I-Ceramic Cookware inikeza ezinye iinzuzo zeConcer Cast ngaphandle kokukhathazeka
Kulabo abathanda ukuva kunye nokushisa ukutshatyalaliswa kwensimbi yentsimbi kodwa ukwesaba inkqubo yokuhlwaya, i-cookware ekhityiweyo e-ceramic iyinto enhle, xa ibiza, ikhethileyo. I-enamel egugile kunye nebalabala yinkonzo yokuhlambela i-dishwasher kwaye inokungathi yintonga kwaye igubungele yonke indawo ye-cookware ezo ukunciphisa intloko ecocekileyo.
I-Copper Cookware yiNtsebenziswano ngeZiko ezithile
Olunye uhlangothi oluphakanyiswa ngabapheki beesukisi kunye neengqungquthela zethusi, ezigqwesileyo ngokufudumala okufudumalayo kunye nokusabalalisa ukushisa. Ekubeni ubhedu bunokungena ekudleni xa kuninzi xa kushushu, iindawo zokupheka zihlala zixutywe nge-tin okanye insimbi engenasici.
Izitambo ezingabinakunokuthi zikhuseleke, Ukuba zisetyenziswe kakuhle
I-Teflon ingubo engekho yentambo esetyenziselwa ukuthintela ukutya ekunamatheleni kwiphepha le-cookware. Ezinye iinkalo zendalo kunye nempilo zivele zihambelana nenkqubo yokwenza iTeflon, kodwa ngokusetyenziswa kwayo kwasekhaya, impendulo iyinkimbinkimbi. Izifundo zibonise ukuba iingubo ezingabambekanga zizinzile kwaye zikhuselekile ngexesha leemeko zokusetyenziswa eziqhelekileyo.
Nangona kunjalo, xa kuphantsi kwamaqondo okushisa ngaphezu kokushisa okuqhelekileyo (ngaphezu kwama-degrees ama-Fahrenheit angama-500), kunokukhutshwa iifuthu. Ukuze kungabikho isizathu sokufumanisa, iintaka zibonakala zivalelekile kuloo mililo. I-American Cancer Society ithi akukho mingcipheko eyaziwayo enxulumene ne-Teflon-cooked-cooked cookware. Ngokusetyenziswa okufanelekileyo kunye nokunyamekela, iimbiza kunye ne-pan-eyenza ngaphezulu kwesigamu sazo zonke iimveliso zokupheka kwi-US-kufuneka zikhuselekile ukusebenzisa.
9 Iimfazwe zeMidlalo zeMpi
Uvavanyo lwe-Hydrogen Balloon Explosion
Yintoni oyenzayo xa i-Corvette Yakho-I-Flat Tires Flat ikhupha uMoya